डिस्पोजेबल मास्क, FFP2 / FFP3 KN95 मास्क, सुरक्षा कवभर - आह - केन्द्र
एएच-सेन्टर कं, लिमिटेड शून्य दोष उत्पादनहरु को लागी अनुसरण; अन्तर्राष्ट्रिय उच्च-अन्तको बजार कब्जा गर्न उत्पाद र प्राविधिक नवीनता पालन गर्नुहोस्, मुख्यतया जापान, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया र अन्य देशहरू र क्षेत्रहरूमा बेचिन्छ। यसैबीच, तपाइँको OEM ODM आदेशहरू स्वागत छ। हामी अनुसन्धान, निर्माण, मार्केटिंग र गैर बुनेका उत्पादनहरूको सेवामा प्रयास गर्दछौं।
समतल अनुहार मास्क
एक अपरेटिंग कोठामा वा अन्य मेडिकल सेटिंग्समा स्वास्थ्यकर्मीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको मेडिकल मास्क विशेष रूपमा महामारी वा महामारीको स्थितिहरूमा। यसले पहिरनेलाई सम्भावित दूषित तरल पदार्थको स्प्लेशबाट पनि बचाउँछ जुन विशेष अवस्थामा हुन्छ।
गैर सम्पर्क थर्मामीटर सजिलो एक बटन मापन, बच्चाहरू र उमेरहरूको लागि सरल अपरेशनहरू उच्च परिशुद्धता इन्फ्रारेड सेन्सरको प्रयोग गरेर स्वचालित रूपमा शरीरको तापमान डाटा र बुद्धिमान क्यालिब्रेसनको धेरै सेटहरू स collect्कलन गर्दछ, मापन अधिक सटीकमा गरिन्छ र प्रदर्शन स्थिर र विश्वसनीय हुन्छ।
केएन / / / FFP2 फेस मास्क फिल्टरेशन दक्षता (धुलो हटाउने दर) o%% भन्दा बढी तेलको कण पदार्थको लागि हो, र फिल्टर सामग्री मानव शरीरको लागि हानिरहित हो।
* उच्च लोचदार इयर लूपहरू आरामदायक र कडा छैन।
* समायोज्य नाकको टुक्रा मास्कले उपयोगकर्ताको अनुहार कवचले ढाक्छ।
* कडा इयर लूप र सुन्दर आकारका लागि ठोस अल्ट्रासोनिक स्पट वेल्डिंग एज प्रेसिंग।
* डिस्पोजेबल एसएमएस सुरक्षात्मक गाउन उच्च गुणस्तरको कम्पोजिट सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। यससँग एन्टि भाइरस, सास गर्न, ओसमोसिस रोकथाम, वाटरप्रूफिंग, र यो स्थिर रहितको कार्य गर्दछ।
* डिस्पोजेबल एसएमएस सुरक्षात्मक सूट यसको दुबै पानी प्रूफिंग र सास फेर्न मिटरिएल सुविधाहरूको लागि लगाउन सहज छ।
* हीट-सिलि SMS एसएमएस रबर पट्टी उच्च सुरक्षा स्तर बनाउँछ।
* २ वर्ष लामो शेल्फ-लाइफ र छोड्न सजिलो, यसले वातावरण मैत्री बनाउँछ।
एएच-सेन्टर कं, लिमिटेड २० 20० मा हेफेई, आन्हुई प्रान्तमा स्थापना गरिएको थियो, आधुनिक उद्यम मध्ये एकको रूपमा अनुसन्धान र विकास उत्पादन र बिक्रीको साथ। स्थापना भएदेखि यता कम्पनी द्रुत रूपमा विकास भइरहेको छ, करिब २ production8,००० वर्ग मिटर जम्मा कुल उत्पादन क्षेत्र कभर गर्दै छ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरूमा शल्य फेस मास्क, मेडिकल मास्क, ना 95 Face फेस मास्क, एफएफपी २ मास्क, एफएफपी mas मास्क, डिस्पोजेबल फेस मास्क कप, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, अलगाव गाउन, हामीसँग उन्नत उत्पादन सुविधा र उपकरण, पेशेवर कर्मचारी र अनुभवी बिक्री छ।
कर्मचारीहरु लाई जिम्मेवारी
प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमतामा पूरा खेल दिनुहोस्
सही व्यक्तिलाई काममा लिनुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्
फोस्टर र व्यक्तिगत पेशागत सीपहरूको विकासको लागि प्रोत्साहित गर्नुहोस्
चलिरहेको रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहोस्
कर्मचारीहरुलाई नवीन र परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्
सकारात्मक कार्य वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्
टीम वर्कलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्
पहिचान गर्नुहोस् र उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धी क्षतिपूर्ति र लाभ प्याकेज प्रस्ताव गर्नुहोस्
निरन्तर द्वि-मार्ग संचार फोस्टर
ग्राहकहरु लाई जिम्मेवारी
ग्राहक सन्तुष्ट महसुस गर्न दिनुहोस्
ग्राहकको दृष्टिकोण र रणनीति बुझ्नुहोस्
लगातार हाम्रा उत्पादनहरू, सेवाहरू र मानहरू सुधार गर्नुहोस्
पूर्वानुमान र ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न
प्रभावकारी ग्राहक र आपूर्तिकर्ता सम्बन्ध स्थापना गर्नुहोस्
उद्यमको लागि उत्तरदायीता
हाम्रो व्यवसायको विकास गर्न
दीर्घकालीन नाफा सुधार गर्नुहोस्
हाम्रो व्यवसाय र ग्राहकहरुको मापन विस्तार गर्नुहोस्
लगातार नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू र समर्थनमा लगानी गर्नुहोस्
नैतिक अभ्यास पालन गर्ने कार्य
इमान्दारी र इमान्दारीका साथ कार्य गर्न
आपसी विश्वास र सम्मानको कदर गर्नुहोस्
कार्यबलमा विविधता र सांस्कृतिक सराहनालाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्
समुदाय र यसको वरपरको सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यकता
PM2.5 मास्कहरू खरीदका लागि सुझावहरू
कसरी PM2.5 मास्क छनौट गर्ने? आजका शहरहरू धुन्धले भरिएका छन्, र हावाको गुणस्तर चिन्ताजनक छ। हामी छलफल गर्छौं कि मास्कले सुरक्षा बन्धनलाई जनाउँछ जुन विशेष गरी PM2.5 को लागी डिजाइन गरिएको हो, जबकि साधारण नागरिक मास्क मुख्यतया चिसो राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूको सामग्री र विनिर्देशहरूको कुनै एकीकृत आवश्यकता छैन ...
के तपाईंको धुंध मास्क सही रूपमा लगाइएको छ?
एन्टी हेज मास्क दैनिक जीवनमा दैनिक आवश्यकताहरू हुन्, जसले धुलो, धुँध, परागकणको एलर्जी र अन्य कार्यहरू रोक्न सक्दछ, र धुँवालाई मुखको गुहा र नासिका गुहा मार्फत शरीरको फोक्सोमा पस्नबाट जोगाउँदछ र शरीरलाई हानी गर्दछ। अब हेरौं हेज मास्क लगाउने सही तरीका के हो ...
PM2.5 मास्क लगाउने बच्चाहरूको लागि सावधानीहरू
बच्चाहरूका लागि PM2.5 मास्कहरूले निश्चित प्रभाव पार्छ। राम्रो उत्पादनहरूले धेरै जसो हावा प्रदूषण रोक्न सक्छ। तिनीहरूको व्यावहारिक प्रभाव धेरै अन्य सान्दर्भिक कारकहरू, जस्तै हवाई प्रदूषकहरूको प्रकारबाट प्रभावित हुनेछ, जस्तै मास्कको आकार उपयुक्त छ कि छैन, जस्तै कसरी लगाउने भनेर ...